पार्टी एकीकरण पहिले कि सरकारबाट बहिर्गमन ?
As of Sat, 15 Aug, 2020 22:05
पार्टी एकीकरणका लागि सरकार छाड्नुपर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को सर्त समाजवादी पार्टी (सपा) नेपाललाई स्वीकार्य नभएको उक्त पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी एकीकरणका लागि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले वार्ताका लागि पठाएको पत्रको जवाफमा राजपाले वार्ताका लागि सरकार छोडेर आउनुपर्ने अडान अगाडि सारेको थियो ।
राजपाले वार्ता समितिको संयोजकमा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोलाई नियुक्त गरेको थियो । यसबीच नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीचको एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेयता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पार्टी एकीकरणका विषयमा भनेर जनकपुरमा महतोसँग पटक–पटक लामो वार्ता गरेका थिए ।
अनौपचारिक रूपमा राजपाका नेताहरूसँग अझै छलफल भइरहेको बताइएको छ । तर, औपचारिक रूपमा दुई पार्टीबीचको एकीकरणबारे छलफल भएको छैन । राजपाले पार्टी एकीकरणका लागि सारेको औपचारिक लाइन भनेको सरकारबाट हटेर आउनु रहेको पार्टीका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले बताए ।
उनले भने, “हामीले पठाएको औपचारिक पत्रमा सरकारबाट हटेर आउनु भनेका थियौं । अर्को पत्र पार्टीको तर्फबाट गएको थाहा छैन ।” राजपाको यो लाइन वार्ता र एकीकरण विरोधी भएको सपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
सपा राजनीतिक समिति सदस्य डा. शिवजी यादवले पार्टीको एकीकरणको वार्ताका लागि सरकारबाट छोडेर आउनुपर्ने शर्त स्वीकार नगरिने बताए । उनले भने, “पार्टीबीचको एकीकरणमा सरकार छोड्नुपर्ने मागको औचित्य छैन ।” नयाँ शक्ति पार्टीसँगको एकीकरण गर्नुअघि उक्त पार्टीले पनि सरकार छोडेर आउन भनेको थियो । तर, राजपालाई फर्काएको जवाफका आधारमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले पार्टी एकीकरण भइसकेपछि गरिने निर्णय अनुसार सरकारबाट हट्ने बताएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष यादवको भनाइका आधारमा पार्टी एकीकरण गरेका थिए ।
तर, राजपाले आफ्नो त्यो निर्णयलाई सुधार गरेको छैन । पहिलो राजनीतिक अडान यहीनेर बाधक भएको सपा नेता यादवले बताए । राजनीतिक विषयहरूमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा जनताबाट चुनिएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा राजपाले सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ ।
राजपा उपाध्यक्ष मण्डलका अनुसार राजपा पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमत हुनसक्छ । उनका अनुसार राजपा अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्य पूर्ण समानुपातिक प्रणालीम सहमत हुन सक्छन् । तर, कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा पहिले अध्यक्ष मण्डल र पछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूमा यी पार्टीका नेताहरूबीच सहमति कायम भए जुनसुकै बेला एकीकरण हुने सपा नेता यादवले बताए । उनले भने, “पार्टीका नेताहरूको समायोजन दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । पहिले भनेको राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषय नै हुन् ।”
राजपा पार्टीका नेताहरूका अनुसार औपचारिक वार्ता हुन यसअघि पठाइएको शर्त बाधक रहेको छ । उपप्रधानमन्त्री यादवले आफ्नो शर्तमा एकीकरण गर्न चाहेका छन् भने राजपाले आफ्नो शर्तमा एकीकरण गराउन चाहेको छ । “तर पार्टीको संरचना तलदेखि माथिसम्म नभएकाले हामीसँग राजपाको शैलीमा जाउँ भन्दा हामी त्यसमा जान सक्दैनौं । राजपाको जस्तो अध्यक्ष मण्डलको शैलीमा पार्टी एकीकरण हुँदैन,” राजनीतिक समितिका सदस्य यादवले भने ।